ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလိမ်ပြောတတ်တယ် (ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး) | The Noble Eightfold Path
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလိမ်ပြောတတ်တယ် (ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး)
မေး။ ဒကာကြီးအိမ်က နေ.တ၀က်လောက် ၀အောင်ကျွေးတဲ. ဒကာမကြီးနှင်. သံသရာတစ်လျှောက်လုံး ၀အောင်ကျွေးတဲ. ဘုရားရှင် ဘယ်သူနဲ့ ပိုတည့်မှာလဲ။
ဖြေ။ ဘုရားရှင်နဲ့ အတည့်ဆုံးလို.ပြောရမှာပါပဲဘုရား။